बाराको एक वडा कार्यालयले बिकास नगरेको र सुचना लुकाएको आरोप - Cherwant Khabar
कलैया उपमहानगरपालिका वाड.न.९ ले बिकास नगरेकाे र सुचनाकाे हक समबन्धि अधिकारबाट बन्चित गराएको आरोप लगाउदै सम्पुर्ण वडा बासि आन्दोलन गरेका छन।
वडामा बिकास नगरेको साथै वडा कार्यालय भबन अगाडिको बाटोमा नाला समेत नबनेकोले बाटोमा नै हिलोमय तथा पानी जमेको अवस्था ले डा. सुशिल शाहकाे नेतृत्वमा आन्दाेलन गरीएको छ।
आन्दोलनमा वडा कार्यालय मुर्दाबाद वडा अध्यक्ष को नारा लगाईएको छ। बाटोको बिकास गर्न जन्ताको खुन पसिनाबाट उठाईएको राजश्वलाई दुरुपयोग गरीएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरीएको छ। स्थानीयले वडामा विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, योजना छनौट, सूचनाको हक लगायतका बारेमा वडाअध्यक्ष डा. अख्तर आलम अन्सारीले जानकारी नदिएको आरोप लगाएका छन।
वडाबासीलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराइएको तथा मौखिक रुपमा बाटो सहित नाला निर्माण नगरपालिकाको योजनामा समावेश भएको बताएपनि नगारपालिकाको योजनामा नसमेटिएको हो। वडाको सडकमा रहेका बिजुलीका पोलहरुमा ४ महिनादेखि बत्ति नराख्दा रातिमस अँध्यारो रहने गरेको छ। वर्षाका कारण पानी जमेको, नाला सफाई नगरेको लगायतका कामहरुमा ध्यानाकर्षण गराउनकोलागि आन्दोलन गरीएको डा. सुशिल साहले बताएका छन ।
कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवाल थप ५ दिन थुनामा